एलआईसी इन्स्योरेन्सको एक सय ३३ अर्बको आईपीओ आउँदै - Arthik Sandesh एलआईसी इन्स्योरेन्सको एक सय ३३ अर्बको आईपीओ आउँदै - Arthik Sandesh
२०७८ माघ १५, शनिवार
शेयर बजार ,
एलआईसी इन्स्योरेन्सको एक सय ३३ अर्बको आईपीओ आउँदै
मङ्सिर २, २०७८
काठमाडौं– नेपालमा पनि बीमा कारोबार गरिरहेको भारतीय जीवनव बीमा कम्पनी एलआईसी (लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया )ले एक सय ३३ अर्ब डलरको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । एलआईसीभारतको सबैभन्दा ठूलो जीवन बिमा कम्पनी हो । भारतको लगानी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार सन् २०२२मा एलआईसीको आईपीओ निष्कासन गर्ने योजना छ ।
एलआईसीको १० प्रतिशत सेयर बिक्री गरी भारत सरकारले १३३ अर्ब डलर अर्थात १०० खर्ब भारु संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको इकोमोकिक टाइमले लेखेको छ । ५ प्रतिशत सेयरले एलआईसीलाई भारतकै ठूलो आईपीओ र १० प्रतिशत डाईलुसनले विश्वकै दोस्रो ठूलो बिमा कम्पनी बनाउने बताईएको छ ।
नेपालमा कारोबार गरिरहेको कम्पनी भए पनि नेपालीले भने आईपीओमा आवेदन गर्न पाउने छैनन् । नेपालीले आईपीओ भर्न नेपालको धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएर नेपालमै आईपीओ निष्कासन भएको हुनुपर्छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सितारमनले सन् २०२० को फेब्रुअरीमा नै उक्त सेयर बिक्रीको घोषणा गरेकी थिइन् ।
भारत सरकारले आगामी वर्ष आधा दर्जन संस्थानलाई निजिकरण गरने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले अधिक नोक्सानमा गएपछि एयर इन्डियालाई निजीकरण गरेर टाटा सन्सलाई हस्तान्तरण गरेको छ । एलआईसी भारतको लगानीमा नेपालमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल लिमिटेडले जीवन बिमा व्यवसाय गरेको छ । कारोबारका हिसावले एलआइसी नेपाल दोस्रो ठूलो जीवन बिमा कम्पनी हो । यसको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ । बजारमा सेयर मूल्य २०५० रुपैयाँ छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमित थपिने भन्दा,निको हुनेको संख्या धेरै
देशभर थप ४ हजार ९०४ जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । १४ हजार ५६२ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट ३ हजार ३१८ तथा एन्टिजेन विधिबाट १ हजार ५८६ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
चुनाव वैशाखमै हुने संकेत,के शेयर बजारमा उत्साह फर्किएला ?
काठमाडौं -: आउँदै वैशाखमा स्थानिय निकायको चुनाव हुने सम्भावना फेरि बढेको छ । सरकारका मन्त्रीहरुले नै यसको संकेत गरेका हुन ।
एनएलजी इन्सुरेन्सको लाभांश घोषणा,नगद र शेयर कति ?
काठमाडौं - एनएलजी इन्सुरेन्सले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको बिहीबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १०% बोनस सेयर र कर तिर्न ०.५२६३% नगदसहित कुल...
शुभ बिहानी । आज शनिबार आफ्नो राशिफल कस्तो छ हेर्नुहोस
उपत्यकामा जोर बिजोर हटाउने निर्णय
५ महिनापछि माघ २१ गते आइपीओ निष्कासन हुने
विगतलाई हेर्ने हो भने आज बजार शतक हाराहारी नै बढ्ने देखिन्छ - रोहन कार्की
के ५ महिना पछि यो हप्ता आइपीओ जारी हुँदै छ ?
फेरी गयो भूकम्प,केन्द्र विन्दु कहाँ ?